Tantaran'ny orinasa - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture dia manolo-tena hanome famokarana avo lenta sy serivisy fivoriambe One-Stop PCB ho an'ny mpanjifa manerantany. PCBFuture dia natombok'i SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD ary miorina eo amin'ny foibe elektronika manerantany Shenzhen China.
KAISHENG PCB natsangana tamin'ny taona 2009, dia iray amin'ireo orinasam-pamokarana siramamy vita pirinty manerantany. Mba hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa mahomby sy mahomby, KAISHENG dia manome serivisy fivoriambe turnkey PCB ao anatin'izany ny firafitra PCB, ny PCB manufacturing, ny sourcing ny singa ary ny fivoriambe PCB ho an'ny mpanjifa. PCBFuture dia marika iray fanampiny an'ny KAISHENG mifantoka amin'ny serivisy fivoriambe PCB iray.
Hatramin'ny nananganana azy, PCBFuture dia nanolotra serivisy fivoriambe turnkey PCB ho an'ny mpanjifa any Eropa, Amerika, Kanada, Japan, Korea sns. Avy amin'ny prototyping haingana, fifangaroana avo lenta hatramin'ny famokarana avo lenta, dia tadidintsika foana fa ny kalitao ambony, amin'ny fandefasana ara-potoana, ny vidin'ny fifaninanana ary ny serivisy tsy mandeha amin'ny laoniny no fomba tokana ahazoanao ny tsy fivadihana. Io dia ahafahanao, ilay mpanjifa hajaina, hifantoka amin'ny orinasanao ifotony antoka fa azo antoka fa eo am-pelatanana sy azo antoka ny filanao.
PCBFuture dia manohy mandray teknolojia mandroso any an-toerana sy any ivelany, ary naka fitaovana SMT mandroso avy any Japon sy Alemana, izay toy ny milina fametrahana haingam-pandeha, ny milina fanaovan-gazety mandeha ho azy ary koa ny milina fametahana hafanana miisa 10. Ny fivoriantsika PCBA sy ny atrikasa tsy misy vovoka dia azo antoka amin'ny alàlan'ny detection AOI sy X-ray. Mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2015 izahay, ny takelaka boribory rehetra dia eo ambanin'ny fanandramana elektrika alohan'ny hametrahana amin'ny tsipika fivoriambe SMT, ary ny PCBA rehetra koa dia azo zahana raha ilaina alohan'ny fanaterana. Ny fanatsarana mitohy dia iray amin'ireo kolotsaina ao amin'ny orinasa, ary tokony ho iray taminao, izay manosika ny fiaraha-miasa maharitra sy matanjaka eo aminay.
Tena reharehantsika ny mitondra ny mpanjifantsika sy anay hahita fahombiazana amin'ny alàlan'ny ekipanay matihanina izay manana traikefa manankarena, fihetsika feno fahatsorana sy fitandremana. Ny mpiasanay dia afaka manampy ny mpanjifa amin'ny fanomezana vahaolana mifangaro manomboka amin'ny varotra mialoha ka hatramin'ny varotra aorian'ny varotra. Ny manam-pahaizana momba ny kaonty momba ny fandaniam-bola dia afaka miara-miasa aminao ihany koa hamorona vahaolana mahomby indrindra amin'ny fizotran'ny prototyping anao.
Ny matihanina, malefaka ary azo ianteherana no fototry ny fomba hanomezana izay ilain'ny mpanjifanay. Mino tanteraka izahay fa ho afa-po tanteraka ianao raha miara-miasa aminay. Andao hankafy ny asa sy ny olon-dehibe hiaraka.